Afar kamid ah Xidigaha Manchester United oo tababarka ku soo laabtay. – Puntland News
Home 2017 May 3 Sports Afar kamid ah Xidigaha Manchester United oo tababarka ku soo laabtay.
Afar kamid ah Xidigaha Manchester United oo tababarka ku soo laabtay.
Manchester United ayaa dib u heshay afar ka mid ah xidigahii dhaawacyada kaga maqnaa iyagoo kasoo muuqday tababarka ay kooxda ugu diyaar garoobeyso kulanka lugta hore wareega Semi Finalka tatanka UEFA Europa League.
Eric Bailly, Paul Pogba, Phil Jones iyo Cris Smalling ayaa ka qeyb qaatay tababarkii ugu dambeeyay oo ay kooxda ugu diyaar garoobeyso kulanka ay martida u noqon doonaan kooxda reer Spain ee Celta Vigo.
Mourinho ayaa booqan doona waqooyiga Spain, waana mid ka mid ah kulamadiisa ugu muhiimsan ee xilli ciyaareedkaan madama isha ugu weyn ee ay kooxdiisa Champions League kaga soo qeyb gali karto tahay iney ku guuleysato tartanka labaad ee ugu weyn yurub.